Taliyaha Ciidamada Booliska oo ruqseeyay dhalinyaro aqoonyahano Booliska ka tirsanaa – XAMAR POST
Taliyaha Ciidamada Booliska oo ruqseeyay dhalinyaro aqoonyahano Booliska ka tirsanaa
By Mohamed Ahmed On Jun 13, 2018
Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliya Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko, ayaa ruqseeyay qaar ka mid ah dhalinyaro Jaamiciyiin ah oo ku biiray ciidanka Booliska Somaliyed.
Dhalinyaradan oo sidoo kale soo qaatay tababar dhanka Dibadda ah oo ku aadan hawlaha ciidamada Booliska Somaliya, ayaa ugu dambeyn markii ay soo gaareen Magaalada Muqdisho, xilli ay filayeen in darajo ciidan iyo dalacsiin la siin doono, waxa ay la kulmeen arrin taasi ka duwan.
Taliyaha Ciidamada Booliska Somaliya Bashiir Cabdi Maxamed, ayaa la sheegay in dhalinyaradan qaarkood uu ku abaalmariyay inuu ka ruqseeyo ciidamada Booliska Somaliya, sabab illaa hadda aanan la ogeyn.
Qaar ka mid ah dhalinyarada la ruqseeyay, ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin falka uu ku dhaqaaqay Taliyaha ciidamada Booliska ee uu shaqada kaga eryay ardaydaan Jaamiciyiinta ah ee ciidamada Booliska Somaliya ka tirsan.
Sidoo kale Taliyaha Ciidamada Booliska ayaa lagu eedeeyay inuu ku tacadiyo awooda Maamul ee ciidamada Booliska Somaliya, islamarkaana uusan xishmeyn dhalinyarada waxbaratay ee Booliska Somaliya ka tirsan.
Ciidamada Booliska ayaa xilligaan ka cabanaya tacadiyada kala duwan ee Taliyaha ciidamada Booliska uu ku haayo, inkastoo Wasiirka amniga arrintaan wali aysan gaarin.
Kheyre oo ka hadlay Sababta Wadooyinka u xiran yihiin iyadoo Farmaajo uu amray in la furo
XOG: Sirdoonka Somalia oo Ogaaday Xeelado Layaab leh oo Al shabaab ay ku galaan Buuraha Galgala